Tina - အင်နာလော့, ဒစ်ဂျစ်တယ်, MCU နှင့်ရောနှောထားသောတိုက်နယ် Simulator
တိုက်နယ် Entry '
သိထား Editor ကို
3D Breadboard နထေိုငျ
ညီမျှခြင်း Editor ကို
သိထားသင်္ကေတ Editor ကို
component Toolbar ကို Editor ကို
စိတ်လှုပ်ရှား Editor ကို
analog တိုက်နယ်ခြင်း simulation
တိုးချဲ့ရောနှောထားသော Mode ကို
HDL ခြင်း simulation
SystemC အသုံးပြုခြင်းလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း Circuits
ဒစ်ဂျစ်တယ် Vhdl ခြင်း simulation
ဒစ်ဂျစ်တယ် Verilog အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ခြင်း simulation
Verilog A နှင့် AMS ခြင်း simulation
HDL Debugger: Debugging VHDL နှင့် Verilog codes တွေကို
Microcontroller တွေ circuits များ
ကို C သုံးပြီး programming နဲ့ Debugging MCUs
Flowchart အယ်ဒီတာနှင့် Debugger
Microcontroller တွေ-Matrix Flowcode များအတွက် graphical programming ကို tool ကို
interactive ခြင်း simulation Mode ကို
Spice ခြင်း simulation
Monte Carlo နှင့်အဆိုးဆုံးဖြစ်ရပ်မှန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
က S-parameter သည်ပုံရိပ်စစ်
Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ဒီဇိုင်း
real-အချိန်ကို T & M က
အခမဲ့ DC က / AC အသင်တန်း
အီလက်ထရောနစ်ဒီဇိုင်း - Concept ကိုမှသည်လက်တွေ့ဘဝရန်
switch-Mode ကိုပါဝါထောက်ပံ့ရေးဒီဇိုင်း Templates ကို
Web ပေါ်ရှိ Tina Circuits
စိတ်လှုပ်ရှား Editor ကို (ARB)
analog ခြင်း simulation
TINACloud နှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ် VHDL ခြင်း simulation
TINACloud သုံးပြီးအွန်လိုင်း Microcontroller တွေ circuit ကိုတုပခြင်း
TINACloud အတွက် interactive တိုက်နယ်ခြင်း simulation
TINACloud သုံးပြီးအင်နာလော့ circuits များ၏အွန်လိုင်းပုံဆောငျအားသုံးသပ်ခြင်း
အွန်လိုင်း Spice TINACloud နှင့်အတူသုံးသပ်ခြင်း
TINACloud သုံးပြီးအွန်လိုင်း SMPS အားသုံးသပ်ခြင်း
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းယဉ်ကျေးမှုစုံစာပေစင်တာကို PC စာရွက်စာတမ်း-TINALab II ကို
ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျအဘက်စုံသုံးစာရွက်စာတမ်း - LABXPLORER
Tina + အခမဲ့ TINACloud Access ကို Buy
TINACloud Access ကို Buy
shared Circuits ဖိုရမ်
အခမဲ့ DEMO Download FULL ဗားရှင်းဝယ်ယူ
+ အခမဲ့ TINACloud Access ကိုရယူ
FOR တိုက်နယ် Simulator
analog, ဒစ်ဂျစ်တယ် & ရောနှောထားသော circuit
နှင့် PCB DESIGN
အာဏာ & မတတ်နိုင် SOFTWARE
analog, ဒစ်ဂျစ်တယ်, MCU, RF, ပုံဆောငျခြင်း simulation
Spice, ခရုစုတ်, HDL နဲ့ S-parameter သည်မော်ဒယ်များ
VHDL, Verilog, Verilog-တစ်ဦးက & AMS, SystemC
Monte-Carlo, အဆိုးဆုံးဖြစ်ရပ်မှန် & စိတ်ဖိစီးမှုအားသုံးသပ်ခြင်း
interactive ခြင်း simulation နှင့်ကာတွန်း
3D အမြင်နှင့်အတူ PCB ဒီဇိုင်း
ရောနှောထားသော HDL ခြင်း simulation
VHDL နှင့် Verilog Debugger
Verilog-A နှင့် Verilog-AMS
Spice & HDL အတူတူပင်တိုက်နယ်အတွင်းရှိ
SMPS ခြင်း simulation
အစာရှောင်ခြင်း Multi-core ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
SMPS devices များအမြောက်အများ
DC က, AC အများနှင့်ယာယီအားသုံးသပ်ခြင်း
startup, Input အားနှင့်ဝန်ခြေလှမ်း
Microcontroller တွေခြင်း simulation
ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရောထွေးဆားကစ်အတွက် MCU ခြင်း simulation
hex, ASM, C, Flowchart ပရိုဂရမ်းမင်း
8051 MCUs ကျော် PIC, AVR, ARM, ST, XMC, 1400,
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုင်စင် Options ကို
ပညာရေးဆိုင်ရာ site ကိုလိုင်စင်
စက်မှု site ကိုလိုင်စင်
ပေါင်းစည်း PCB ဒီဇိုင်း
Gerber နဲ့ G-code ကို output ကို
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PCB layout ကို, ဝင်း
TINACLOUD ရန်သင့်ဒီဇိုင်းများ Upload လုပ်ပါ
TINACloud ကနေ PC ကိုမှစီမံကိန်းများကို Download
အင်နာလော့, ဒစ်ဂျစ်တယ် & ရောနှောထားသောတိုက်နယ်နဲ့ PCB ဒီဇိုင်းအဘို့အ circuit Simulator
Tina နဲ့ TINACloud ကဘာလဲ?
Tina v12 အသစ်ကဘာလဲ?
Tina နှင့်အတူအော့ဖ်လိုင်းတိုက်နယ်ခြင်း simulation
Tina ဒီဇိုင်း Suite ဟာအစွမ်းထက်သေးတတ်နိုင် circuit ကို Simulator ကိုနှင့် PCB ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုဒစ်ဂျစ်တယ်, ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာဒီဇိုင်း, နဲ့ Analog ၏အစစ်အမှန်အချိန် testing အတွက်အထုပ်, ခရုစုတ်, HDL, MCU နှင့်ရောထွေးအီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်နှင့်၎င်းတို့၏ PCB အပြင်အဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်း SMPS, RF, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်... optoelectronics ဆားကစ်; generate နှင့်ဘက်ပေါင်းစုံ flowchart tool ကိုသုံးပြီးဒီဘာဂ် MCU ကုဒ်; တစ်ဦးရောနှော circuit ကိုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စမ်းသပ် Microcontroller တွေ applications များ။ သငျသညျ 20 ကွဲပြားခြားနားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Modes သာထက်ပိုမိုမှတဆင့်သို့မဟုတ် 10 မြင့်မားတဲ့နည်းပညာကို virtual တူရိယာနှင့်သင်၏ circuit ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။ Tina ရဲ့ခေတ်မီပုံပြတင်းပေါက်အတွက်ကို virtual တူရိယာအပေါ်, သို့မဟုတ်သင်ပင်ဒီဘာဂ်နှင့်စမ်းသပ် HDL & MCU applications များ, run, ဖွံ့ဖြိုး, စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းသင့်ရဲ့ circuit ကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်ရှိရာတိုက်ရိုက်အပြန်အလှန် mode မှာသင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုတင်ပြ။ ပညာတတ်များသင်တန်းပတ်ဝန်းကျင်၎င်း၏ထူးခြားသော features တွေကြိုဆိုပါတယ်ပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများ, Tina အနေနဲ့အသုံးပြုရလွယ်ကူမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် tool ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ အကဲဖြတ်များအတွက်အခမဲ့သရုပ်ပြဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်
TINACloud နှင့်အတူအွန်လိုင်းတိုက်နယ်ခြင်း simulation
အဆိုပါ TINACloud အွန်လိုင်း circuit ကို Simulator ကိုနှင့်တကွ, installer ဗားရှင်း additon အတွက်ယခုသင်သည်လည်း PC များ, Macs, ပါးလွှာ clients များ, တက်ဘလက်, စမတ်ဖုန်းများ, စမတ်တီဗီနှင့် e-စာအုပ်အပေါ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာသင့်သိထားဒီဇိုင်းများနှင့်၎င်းတို့၏ PCB အပြင်အဆင်တည်းဖြတ်ပြီး run နိုင်ပါတယ် မဆိုတပ်ဆင်စရာမလိုဘဲစာဖတ်သူများ။ သင်လုပ်နိုင်သည်... ဘယ်နေရာမှာမဆိုအင်တာနက် access ရရှိထားတဲ့သောလောကဓာတ်၌, အိမ်မှာနှင့်ခရီးသွားလာနေစဉ်, ရုံးအတွက်စာသင်ခန်း TINACloud ကိုအသုံးပြုပါ။ ကန့်သတ်အချိန်ငါတို့သည် Tina အပေါငျးတို့သသစ်ကိုလိုင်စင်နှင့်အတူ TINACloud တစ်ဦးကိုအခမဲ့ဆော့ဝဲအစုအဝေးကမ်းလှမ်းနေကြသည်။
TINACloud မှာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ www.tina.com/tinacloud
ဆားကစ်ခြင်း simulation အတွက်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူနှင့်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဆီမီးကွန်ဒတ်တာကုမ္ပဏီများအား circuit ကို Simulator ကို software များကိုလိုင်စင်ရတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီအဖြစ်, DesignSoft ထူးခြားတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအဖြစ် device ကိုမော်ဒယ်များဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ software နှင့်မော်ဒယ်စွမ်းရည်... အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ SPICE, VHDL, Verilog, Verilog-AMS, SystemC မော်ဒယ်များနှင့်ခေတ်သစ်ဘက်ပေါင်းစုံဆားကစ်၏ရောနှော circuit ကိုမော်ဒယ်များ။ ကျနော်တို့ Tina, P ကိုများအတွက် syntax သဟဇာတမော်ဒယ်များဖန်တီးSpice, SIMetrix, LTSpice နှင့်အခြားခြင်း simulator ။ ထုတ်ကုန်များတွင် Opamps၊ discrete semiconductors (diodes, MOSFETs, IGBTS စသည်) SMPS ICs, LED drivers, AD နှင့် DA converters, Microcontroller များ (ARM, PIC, AVR, XMC စသည်) နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ စျေးကွက်တွင်အလျင်မြန်ဆုံး Simulator များထဲမှ TINA ၏တီထွင်ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားတိကျပြီးအချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်သည့်ကိရိယာမော်ဒယ်များကိုတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုသည့် simulation algorithms ကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်သည်။ သင်မော်ဒယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတန်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Tina အာဏာအရှိဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံး convergence တစ်ခုဖြစ်သည် Spice စျေးကွက်အပေါ် Simulator ကို။ ဒါဟာ Berkely နှစ်ဦးစလုံး includudes Spice နှင့် X ကိုSpice based Spice အင်ဂျင်အများစုထောက်ခံပါသည် Spice parallelised အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် precompiled မော်ဒယ်များနှင့်အတူတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများ။ ကြီးမားသောအပြင် Spice component တစ်ခုစာကြည့်တိုက်... Tina အတွက်, သင်သည်မည်သည့်အနေဖြင့်အသစ်သော Tina အစိတ်အပိုင်းများကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ် Spice တစ်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ CD ကိုထံမှသို့မဟုတ် subcircuits သို့လှည့်သိထား၏ဝေမျှထံမှရရှိသောကအင်တာနက်ထဲကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးရှိမရှိ subcircuit, ။ Tina အလိုအလျောက်တုဂံပိတ်ပင်တားဆီးမှုအဖြစ်ဤအ subcircuits ကိုကိုယ်စားပြုသော်လည်း, သင်သည် Tina ရဲ့သိထားသင်္ကေတအယ်ဒီတာနှင့်အတူသင်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်း catalog သို့မဟုတ်တိုင်းတာခြင်းဒေတာကနေမော်ဒယ် parameters တွေကိုတွက်ချက်ထို့နောက် catalog သို့သစ်ကိုပစ္စည်းတွေထည့်သွင်းဖို့ Tina ရဲ့ parameter သည် extractor ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ADC ကို & အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုတုပခြင်း
Tina ဦးဆောင်၏ခေတ်သစ်အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုနှင့် ADC ကို converters များအတွက်မော်ဒယ် (SAR နဲ့ Sigma-မြစ်ဝကျွန်းပေါ်) တို့ပါဝင်သည်အပြိုင်နှင့် SPI interface ကိုနှင့်အတူ (အင်နာလော့ဖုန်းများအတွက်, လုပျသငျ integer နှင့်တက္ကဆက် Intruments) ထုတ်လုပ်တယ်။ ယခုတွင်သင်သည် signal ကိုသမာဓိရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ခရုစုတ် Model ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်မော်ဒယ် ADCs နှင့်မြင့်မား၏ DACs... စျေးကွက်အပေါ်အလွန်နည်းပါး software ကိုအားလုံးမှာပြီးပြည့်စုံ DACs နှင့် ADCs တူအောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ရှုပ်ထွေး Tina တစ်မူထူးခြားတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
VHDL, Verilog, SystemC ပံ့ပိုးမှု
Analog စအတွက်ဒီဇိုင်းများအတည်ပြုရန် VHDL, Verilog, Verilog-A, Verilog AMS နှင့် SysteC, ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရောထွေး-signal ကို Analog စ-ဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ: Tina အားလုံးအဓိက Analog စ, ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရောထွေးဟာ့ဒ်ဝဲဖျေါပွခကျြဘာသာစကားများပါဝင်သည်။ သင့်ရဲ့ဆားကစ် Tina ၏စာကြည့်တိုက်များကနေပြုပြင်နိုင်သည့် HDL လုပ်ကွက်ဆံ့နိုင်ပါတယ်... နှင့် Xilinx သို့မဟုတ်အခြား HDL အစိတ်အပိုင်းများကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ကနေ download ။ Tina အလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာ machine code ကိုသို့ HDL compiles သို့မဟုတ်သင်မြန်နှုန်း optimization များအတွက် precompiled SystemC အစိတ်အပိုင်းများကိုသုံးနိုင်သည်။ သငျသညျလွတ်လပ်စွာ HDL ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီး Spice ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောနှင့် Tina ၏သိထားအစိတ်အပိုင်းများကို။ သင်တို့ကိုလည်းထို့နောက်ချက်ချင်းရလဒ်တူအောင်ဖန်တီးများနှင့်တွေ့မြင်မည်သည့် HDL အစိတ်အပိုင်းများ၏ HDL အရင်းအမြစ်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ သင်က, HDL ကုဒ်ခြေလှမ်း-by-step execute breakpoints အား add, watchpoints, variable ကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပိုပြီးဖော်ပြရန်။ နိုင်ပါတယ် HDL debugger built-in နဲ့အတူ Tina အတွက်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းစာကြည့်တိုက်အပြင်, သငျသညျ HDL subcircuits ထံမှအသစ်သော Tina အစိတ်အပိုင်းများကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
Microcontroller တွေ (MCU) ခြင်း simulation
Tina လည်းပိုပြီးသင်, ဒီဘာဂ်စမ်းသပ်ရန်နှင့်ဆားကစ်ခြင်း simulation ကို အသုံးပြု. ရောထွေး circuit ကိုပတ်ဝန်းကျင်တွင် interactive ကို run နိုင်သည့် 8051 အစိတ်အပိုင်းများသို့ဖြစ်လျှင်, Microcontroller တွေ (PIC, AVR, 1400, HCS, ARM, ST, Arduino, XMC) ၏ကျယ်ပြန့်ပါဝင်သည်။ MCU စည်းဝေး built-in the သင်သည်သင်၏စည်းဝေးကုဒ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခွင့်ပြု... ချက်ချင်းရလဒ်။ MCch များကို built-in flowchart tool (သို့) C ဖြင့် ပြင်၍ C compiler နှင့်အခြား Code Generator များ သုံး၍ သင်ပရိုဂရမ် လုပ်၍ လည်းလုပ်နိုင်ပြီး Microchip XC8, MATRIX FLOWCODE၊ Infineon's XMC & Arduino အပါအ ၀ င်အခြား Code Generator များကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
ကွန်ယက်တစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပစ်မှတ် output ကိုတန်ဖိုးများကို, နိမ့်ဆုံးသို့မဟုတ်အများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်အောင် Tina ရဲ့ built-in Optimization tool ကိုမသိသော circuit ကို parameters တွေကိုအလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်အသုံးပြုခြင်း။ optimization ရန်, electroniccircuits ၏ဒီဇိုင်းအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းသင်ကြားမှုအတွက်သာအသုံးဝင်သည်... ဥပမာများနှင့်ပြproblemsနာများကိုတည်ဆောက်ပါ။ ၎င်းသည်ဒီဇိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (သို့) အလုပ်လုပ်နေသောဆားကစ်များမှရရှိသောရလဒ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ circuit ကိုမည်သည့် circuit တွင်မဆိုထည့်သွင်းနိုင်သည့် Design Equations နှင့်အလုပ်လုပ်သော TINA ၏ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းတန်ဆာပလာဖြင့်လည်းကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Tina လည်းအစွမ်းထက် PCB ဒီဇိုင်နာ software ကိုပါဝင်သည်။ Tina ၏အပြည့်အဝ layout ကို module ကိုအုပ်စုခွဲပါဝါလေယာဉ်အလွှာအစွမ်းထက် autoplacement & autorouting, rip-Up နှင့်အတူ PCB ရဲ့ multilayer အပါအဝင်သင်သည်အဆင့်မြင့် PCB ဒီဇိုင်းအဘို့လိုအပ်တယ်အင်္ဂါရပ်အားလုံး, ရှိပြီးများအားလမ်းလွှဲပြောင်း, လက်စွဲစာအုပ်နှင့် "အတိုင်းလိုက်နာ-ငါ့ကို"... သဲလွန်စနေရာချထား, DRC, ရှေ့ဆက်ပြန်မှတ်, pin ကိုများနှင့်တံခါးဝဖလှယ်ခြင်း, စောင့်ရှောက်-In နှင့်စောင့်ရှောက်ထွက်ဒေသများ, ကြေးနီလောင်းအပူကယ်ဆယ်ရေး, fanout, သင့်မဆိုထောင့်ကနေ PCB ဒီဇိုင်း, Gerber file ကို output ကို andmuch ပို 3D အမြင်။ သင်တို့သည်လည်း 3D ၌သင်တို့၏ PCB ဒီဇိုင်းနှင့်ပုံနှိပ်နှင့်အတူမြင်ယောင်, စက်မှုလုပ်ငန်းစံပုံစံများဖြင့် 3D ဝင်းမော်ဒယ်များတင်သွင်းနိုင်သည်။
Virtual Instruments တွေနဲ့ simulated & ရီးရဲလ်အချိန်တိုင်းတာ
အဆိုပါဂန္ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools တွေအပြင်, Tina ကို virtual တူရိယာ၏ကျယ်ပြန့ပါဝင်သည်: Oscilloscope, Generator ကို, Multimeter, Signal Analyzer / သညျ့နိမိတျ Plotter, ကွန်ယက် Analyzer, Spectrum Analyzer, Logic Analyzer, ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြ Generator ကို, XY Recorder, Efficiency-, ပျမ်းမျှ function... value- နှင့်ကြိမ်နှုန်းမီတာ။ သငျသညျ Tina ၌သင်တို့၏ circuit ကိုအပေါ် simulated တိုင်းတာစေသို့မဟုတျ, ဖြည့်စွက်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုသင့်ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ပါကတစ်ဦးအစွမ်းထက် Real-time စမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်းကိရိယာသို့သင့်ရဲ့ Laptop ကိုဒါမှမဟုတ် desktop ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောဆားကစ်ပေါ်မှာတိုင်းတာစေဤကို virtual တူရိယာကိုသုံးနိုင်သည်။
LabXplorer & TINALab II ကိုဘက်စုံသုံး PC ကိုတူရိယာ
Tina ကို virtual တူရိယာနှင့်အတူတစ်ဦး circuit ကို Simulator ကိုထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ အဆိုပါ LabXplorer & TINALab II ကိုမြန်နှုန်းမြင့်ကို PC တူရိယာကိုသုံးပြီးသင်တစ်ဦးအစွမ်းထက်, ဘက်စုံသုံးစမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်းကိရိယာသို့သင့်ရဲ့ Laptop ကိုဒါမှမဟုတ် desktop ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ multimeter လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်ဟာကိုတူရိယာ,... oscilloscope, spectrum ကို Analyzer, ယုတ္တိဗေဒ Analyzer, မတရား waveform မီးစက်, သို့မဟုတ်ပါက mouse ကိုတစ်ကလစ်နှင့်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမီးစက်။ ထို့အပြင် TINALab II ကိုဆားကစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး, troubleshooting, နဲ့ Analog နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အီလက်ထရောနစ်၏လေ့လာမှုတစ်ခုထူးခြားတဲ့ tool အဖြစ်ခြင်း simulation နှင့်တိုင်းတာခြင်းရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် Tina နှငျ့အသုံးပွုနိုငျသညျ။
ပညာရေးဆိုင်ရာ tools များ
TINA တွင်ကျောင်းသားများ၏ဗဟုသုတများကိုစမ်းသပ်ခြင်း၊ တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ၄ င်း၏ပညာရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်များကို အသုံးပြု၍ ပြtroublနာဖြေရှင်းခြင်းနည်းစနစ်များကိုမိတ်ဆက်ရန်အတွက်ထူးခြားသောကိရိယာများလည်းပါ ၀ င်သည် အခမဲ့ DC က / AC အသင်တန်းအမှတ်စဥ် TINA နှင့် TINACloud ၏အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်သင်ကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများအပါအဝင်အခြေခံတိုက်နယ်သီအိုရီကိုသင်ယူနိုင်သည် superposition ဖြစ်လာတယ် theorem, Kirchhoff ရဲ့ဥပဒေများ ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ။ Optional hardware ဖြင့် TINA သည်အမှန်တကယ်ဆားကစ်များကိုစမ်းသပ်ရာတွင်ရရှိနိုင်သည့်ရလဒ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။... Live 3D နှင့်အတူ breadboard solderless ၏ 3D ပုံရိပ်ကိုအလိုအလျောက်တည်ဆောက်နိုင်သည့်ကိရိယာ breadboard။ သင် TINA ကိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စွာအသုံးပြုသောအခါ switches, LEDs, tools စသည်တို့စသည်တို့သည် "live" ဖြစ်လာပြီး virtual ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ breadboard အဖြစ်မှန်၌ရှိသကဲ့သို့။ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ရန် TINA ၏ဤစွမ်းရည်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ MCU ကုဒ်ကိုထုတ်လုပ်ပြီး debug လုပ်ရန်၊ microcontroller ပရိုဂရမ်ကိုလေ့လာခြင်းနှင့်သင်ကြားခြင်းတို့အတွက်ပေါင်းစည်းထားသော Flowchart Editor နှင့် Debugger တို့ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် TINACloud မှ Infineon Designer ကို online prototyping tool တစ်ခုအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောလျှောက်လွှာအတွက်မှန်ကန်သောထုတ်ကုန်ကိုအချိန်တိုအတွင်းရွေးချယ်ရာတွင်ထောက်ပံ့ပေးသော online prototyping tool တစ်ခုအဖြစ်အောင်မြင်စွာစတင်ခဲ့သည်။ TINACloud သည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးမည်သည့် WEB browser တွင်မဆိုအလွန်အမင်းတည်ငြိမ်ပြီးမြန်ဆန်သည်။ သူသည် Infineon ၏ကျယ်ပြန့်သော application အစုစုကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမှရောနှောသော signal များနှင့် RF ဒီဇိုင်းများအထိဆောင်ရွက်သည်။
အွန်လိုင်းစျေးကွက်မန်နေဂျာ Infineon Technologies က AG က
Tina SPICE အကောင်းဆုံး circuit ကို Simulator ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်လျင်မြန်စွာပေါင်းစည်း။ အလိုလိုသိသော graphical interface ရှိသည်။ အင်ဂျင်နီယာအသစ်များသည်ဤစွမ်းအားပြည့်ကိရိယာကိုအသုံးပြုသောအခါအလွန်တိုတောင်းသောသင်ယူမှုကွေးကွေးရှိသည်။
Texas Instruments, Linear Applications ကို Manager က
ငါအများအပြားကွဲပြားခြားနားသော "အရသာ" ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ Spice လွန်ခဲ့သော 25 နှစ်တာကာလအတွင်း။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, ငါ့အသုံးပြုမှု spice ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ကျောကိုသွားနှင့်အများဆုံးသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုမှတ်မိ / relearn ဖို့ရှိခြင်း spice tools တွေကိုတစ် ဦး အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Tina သည်အလွန်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသဖြင့်ပြန်လည်သွားရန်အချိန်လုံးဝနီးပါးမလိုအပ်တော့ပါ။ ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရတော့စျေးကွက်ထဲမှာအလိုအလျောက်ထိုးဖောက်နိုင်ပြီးသုံးရလွယ်ကူပါတယ်။ ၎င်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုသူအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပါဝါသုံးစွဲသူလိုအပ်သည့်စွမ်းရည်အားလုံးရှိသည်။
အကြီးတန်းကျောင်းအုပ်ကြီး MTS, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်
မော်တော်ကား Solutions Group မှ, အလုပျသပေါင်းစည်း
ငါ Simulator မြားမြားမြားအသုံးပွုခဲ့တယျ, ဒါပေမယ့် Tina ကဲ့သို့မြန်ဆန်စွာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ TINA ၏ multi-core အထောက်အပံ့နှင့်တိုးမြှင့်သည့် convergence algorithms တို့သည်ပုံရိပ်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြန်စေသည်။ ငါ CM, VM, topology တိုင်းနီးပါး၏သပ္ပါယ် on-time converters များကိုလုပ်ပါတယ်။ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု၊ PWM နှင့် quasi-resonant နှင့်လွန်ခဲ့သောစက္ကန့်ပိုင်းများကမိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြာသောစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပြီးဆုံးသွားသည်။ TINA ၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပုံစံ၊ သင်္ကေတဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ စကားပြန်၊ သွင်းကုန် PSpice ချောမွေ့စွာမော်ဒယ်များ!
Texas Instruments မှာပါဝါကို Applications ကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်
ငါကွဲပြားခြားနားသောအများအပြားသုံးပြီးတက္ကသိုလ်အဆင့်မှာ Analog စအီလက်ထရွန်းနစ်သင်ပေးတယ် Spice Front-end - ကဒ်ပြားတစ်ကဒ်ဖြစ်လို့ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း TINA သည်လျှပ်စစ်သင်ကြားခြင်း၊ ပရောဂျက်နှင့်အချို့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သော circuit capture and analysis tool ဖြစ်သည်။ TINA သည်သုံးစွဲရလွယ်ကူပြီးအမှားပြင်ဆင်သည့်နေရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။ ရလဒ်များကိုလျှင်မြန်စွာထုတ်လုပ်သည်။ TINA တွင်အားကောင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ကိရိယာများရှိပြီးတိုက်နယ်လည်ပတ်မှုကိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည် circuit သဘောပေါက်ရန်တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများသည်ပထမ ဦး ဆုံးအီလက်ထရောနစ်ဒီဇိုင်းတွင် TINA ကိုစွယ်စုံသုံးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုပြီး၎င်းကိုသူတို့၏ဘွဲ့သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
MIREA - ရုရှားနည်းပညာတက္ကသိုလ်
မော်စကိုနည်းပညာတက္ကသိုလ် (MIREA) တွင်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့်ကွန်ပျူတာအထောက်အကူပြုဒီဇိုင်း (EDA) ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ငါ့ရဲ့အတန်းတွေမှာတော့အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်တွေကိုမော်ဒယ်လ်အတွက်ပရိုဂရမ်မြောက်များစွာသုံးပြီးအီလက်ထရောနစ်လုပ်ငန်းခွင်မှ OrCAD နှင့် SystemC အထိ။ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အီလက်ထရောနစ်သင်ကြားရေးအတွက် TINA သည်အကောင်းဆုံးဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ TINA သည်အလွန်ခင်မင်ဖွယ်ကောင်းသော graphical user interface ရှိပြီးရိုးရှင်းသော settings နှင့် setup setup များပါရှိသည်။ ဆားကစ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုဖိုင်တစ်ခုတည်းတွင်ပူးတွဲထားသည်။ ရလဒ်များကိုပြသခြင်းဖြင့်အလွန်လျင်မြန်စွာနှင့်တိကျမှုရှိသည်။ ကျောင်းသားများသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလွယ်တကူတတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာပေးစာယူသင်တန်းများအတွက် TINACloud အစီအစဉ်ကိုအတန်းများတွင်သုံးပါသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်၊ ပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအားအချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးလွယ်ကူစွာထောက်ပံ့ပေးသည်။ TINACloud ကို အသုံးပြု၍ ကျောင်းသားများသည် circuit simulation ရလဒ်များကိုဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပြုလုပ်သောလက်တွေ့တိုင်းတာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ဒါကတာဝေးသင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တက္ကသိုလ်အတွက်ပိုမိုထိရောက်စေသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်သွန်သင်ခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်း, Office ကိုဒါရိုက်တာရုံး
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ | သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ | Tina - တိုက်နယ် Simulator အင်နာလော့အဘို့, RF, ဒစ်ဂျစ်တယ်, MCU, HDL & ရောနှောထားသော Mode ကိုခြင်း simulation နှင့် PCB ဒီဇိုင်း
မူပိုင်ခွင့်© 2019 DesignSoft, Inc All rights reserved ။
© 2020 • မှပံ့ပိုးသည် GeneratePress